Linux 5.2 rc5: wechishanu Regedza Musarudzo wabuda | Linux Vakapindwa muropa
Isaac | | vatyairi, Kernel
Iwe unogona ikozvino kukodha iyo nyowani Linux kernel kuburitswa kubva kune yepamutemo kernel.org saiti. Uyu Mugovera mumwechete, Linus Torvalds aive mutariri wekuratidzira kuLKML wechishanu RC Regedza Mukwikwidzi, ndiko kuti, iyo ichave mumiriri kuti ive yekupedzisira vhezheni yeLinux kernel. Kunyanya kune izvo zvazvichava Linux 5.2. Linux ndiyo chirongwa chisingazorore, chisingamiri mukusimudzira kwayo, uye kubva pakaburitswa 5.0 kutanga kwegore rino, nhau zhinji nebasa zvakaiswa mairi.
Linus akataura kuti ivo vatove vanosvika kuburitswa kwazvino kwevamiriri pamberi pekusvika kwekupedzisira kweshanduro yekupedzisira yeLinux 5.2. Sekutaura kwaakaita mutsamba, shanduko dziri kuuya dziri kudzikama, pane zvishoma uye zvishoma zvinhu zvekumwaya kuitira kuti vasiye musimboti wapera. Iyo nyowani rc5 package yakatombo diki pane rc4, sekuda. Asi zvakare ichokwadi kuti kuchine zvimwe zvinhu zvakamirira.
Pakati pezvinhu zvitsva zvinogona kuwanikwa mune nyowani Linux 5.2 rc5 kodhi ndeyekugadziriswa kweSPDX, saka diffstat ikozvino inotaridzika kunge yakanaka, diki uye yakashongedzwa. Kune zvekare shanduko dzakajairika mune iyo vatongi kana vatyairi inosanganisirwa, senge iya ine hukama nenzwi, maGPU, netiweki, USB, block zvigadzirwa, HID, nezvimwe Pamusoro pezvo, zvimwe zvipembenene kana matambudziko mukodhi zvinoreva zvivakwa, zvinyorwa, zvisirizvo zvakagadziriswa.
Saka kana iwe uchida kuyedza, iwe unogona ikozvino kurodha pasi kune yako distro kumisikidza, kuumbiridza uye kuiisa. Nenzira iyoyo, iwe uchavewo kubatsira kana ichipa imwe mhando yekutadza kana kukanganisa izvo zvinogona kugadziriswa, kana iwe ukazvipupura, pamberi pekutanga kwekutanga. Rangarira kuti yazvino vhezheni yakagadzika yekernel iri Linux 5.1.11 panguva ino… asi iyo tsanga tsva RC ichaburitswa munguva pfupi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » vatyairi » Linux 5.2 rc5: wechishanu Regedza Musarudzo wabuda
Red Hat yakawana kusagadzikana katatu muLinux kernel
Nyowani Kymera Ventus naApollo kubva ... Slimbook ... ehe ... zvakare